नेकपा सचेतक चौधरीको प्रश्न- गरीबका आँशु देखेर कांग्रेसलाई अलिकति दया लाग्दैन ? - Nepal's Digital News Paper
नेकपा सचेतक चौधरीको प्रश्न- गरीबका आँशु देखेर कांग्रेसलाई अलिकति दया लाग्दैन ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी (नेकपा) संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले भूमिहीन किसानको पक्षमा ल्याइएको गुठी विधेयकको अपव्याख्या गरिएको बताएकी छन् । विधेयकले कतैपनि धार्मिक आस्थामाथि हस्तक्षेप नगरेको सचेतक चौधरीको दावि छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सचेतक चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘चर्को गरी बोल्नेका विषय मात्रै भावनात्मक हुन्छन्रु गरिबका विषय भावनात्मक हुँदैनन् ? गरिबका पक्षमा बोल्नै नहुने ? त्यसो भए गणतन्त्र किन चाहियो ? हलो जोत्नेका विषयमा भावनात्मक हुँदैनन् ?’ भगवानका नाममा मान्छेलाई रुवाउन नहुने चौधरीको भनाइ थियो।
सांसद चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका गुठीको समस्या छुट्टाछुट्टै भएको बताइन् । ‘म दाङको सांसद हुँ, दाङमा स्वर्गद्वारी गुठीको १२ सय बिघा जमिन १६ सय घरधुरीले प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वर्गद्वारी मन्दिरलाई संरक्षण गर्ने मोही किसानको समस्या यति नाजुक छ, उनीहरूको बारेमा कोही किन बौल्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले गरीब किसानको पक्षमा बोल्न प्रतिपक्षीलाई सुझाव दिइन् । संसदमा भावुक हुँदै शान्ताले भनिन्, ‘मान्छेलाई रुवाएर हाँस्ने भगवान् कहाँ हुन्छ ? गरीबका आँशु देखेर प्रतिपक्षलाई अलिकति पनि दया लागेन ?’